पसिनाले देश धानिरहेकाहरुलाई आह्वान
सम्पर्क इमेल: lok.bhattarai111@gmail.com
यो लेख म ती भाई बहिनीहरुलाई नै सम्बोधन गरेर लेख्दैछु जो अहिले मैले यो लेखिरहँदा पनि सम्भवत साउदी, कतार, कोरिया, मलेसिया, इजराइल, युएई लगायतका देशमा ‘डिउटी आवोर’ मा हुनुहुन्छ (माफ गर्नोस, सबै देशको नाम लिँदा लिस्ट धेरै लामो हुने भो।, तर, ‘साउदी, कतार, कोरिया’ भनेर जहाँ जहाँ भनिएको छ, त्यहाँ त्यहाँ नेपालीहरु काम गर्न जाने सबै मुलुक भन्न खोजेको हो भनेर बुझिदिनुहोला)। हाम्रो देशको आर्थिक सूचकहरुले प्रष्टसँग देखाईसकेको छ कि १० औं लाख त्यस्ता भाईबहिनिहरुले नियमित रुपमा त्यताबाट रेमिट्यान्स पठाऊदैनथे भने यो देशको अर्थव्यवस्था ‘ब्रेक डाउन’ भैसक्थ्यो।
‍यसको अर्थ यो हुन्छ कि यो बर्ग अर्थात् तिनै भाई बहिनिहरु नै आज देशको खास मेरुदण्ड बनेका छन्। र त्यस कारण यो लेखको मूल उद्धेश्य पनि तिनीहरुको सम्मान स्थापित गर्नु र तिनका आवश्यकता र आवाजको बारेमा सकारात्मक जनमत सिर्जना गर्नु हो। यहाँनिर भनिहाल्नु पर्ने के छ भने म आफू पनि धेरै वर्ष विदेशमा बसेको र काम गर्न जाने आप्रवासीको समस्या आफ्नै आँखाले देखेकाले यो विषयमा लेख्न प्रेरित भएको हुँ।
यो बर्गको कैयन समस्या होलान, कामका समस्या, कागजातका समस्या, स्वास्थ्य र सुरक्ष्यका समस्या, परिवार ब्यवस्थापनका समस्या जसको बारेमा अझै देशले दिनु पर्ने जति ध्यान दिएकै छैन। यसो भनिरहँदा मेरो ध्यान प्रष्ट रुपले गैरआवासीय नेपाली महासंघ (नन रेसिडेन्ट नेपलिज अस्सोसियेसन, एनअरएनए) भन्ने संस्था र त्यसका क्रियाकलापमाथि पर्न गएको छ।
सरकारको दृष्टिकोणमा विदेशमा रहने नेपालीहरुका आवश्यकता र मागका बारे बोल्नका लागि एनआरएनए छ, उसैले काम गरिरहेको छ; त्यसमाथि एनआरएनए सम्बन्धि ऐन पनि बनिसकेको छl झट्ट हेर्दा कुरा ठिकै जस्तो सुनिन्छ, तर नेपाली संघसंस्था जताततै राजनीतिकरणको शिकार हुने गर्छन, शक्तिशाली व्यक्ति या समूहहरुले संस्थाहरु कब्जा गरेर बस्ने गर्छन र फलत ति संस्थाहरुले अपेक्षा गरे अनुसार काम गर्न सकिरहेका हुँदैनन्। यो कुरालाई विचार गरेर हामीले एनआरएनएको बिगत संरचना, काम र उपलब्धिमाथि मूल्यांकन र निगरानी गर्नुपर्ने भएको छ। तपाई प्रत्येक भाईबहिनिहरुले आँखा चिम्लेर सोच्नुपर्छ, एनआरएनएको कामले तपाई आफुलाई कहिले र कति फाइदा पुगेको छ, के त्यो साच्चि नै एनआरएनएले गरिदिएर भएको काम हो, के एनआरएनए नभएको भए त्यो काम गरिदिने अरु कुनै निकाय थिएन आदि आदि।
मैले यति लेखिसकेपछि कतिलाई लागेको हुन सक्छ, मैले एनआरएनएको बिरोधमा यो लेख लेखेको हो। होइन, कुरा त्यसो होइन। म चाहन्छु, एनआरएनए हुनुपर्छ, यो अझ शशक्त र संगठित हुनुपर्छ, अझ बढी क्रियाशील हुनुपर्छ र सबैभन्दा मुख्य कुरा त्यसले तपाई साउदी, कतार, कोरियाबाट देश धानिरहेका भाईबहिनीहरुबारे बढी ध्यान दिएर काम गर्नै पर्छ। त्यति मात्र होइन जसले देश धानेको छ, देशको मुख्य निर्णयमा उनको हात हुनु पर्छ। भर्खर मात्र देशको ठूलो भागमा स्थानीय निकायको चुनाव सकिएको छ, तर अफसोच देश धान्ने भाईबहिनिहरुले यसमा भोट मार्फत सहभागी हुनै पाएनन्, आशा गरौँ यो परिपाटीको छिट्टै अन्त्य हुनेछ, अब छिट्टै आप्रबासी नेपालीले पनि आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने काममा भाग लिन पाउने छन्, र त्यसमा पनि एनआरएनएले पहल गर्नेछ।
एनआरएनए अस्तित्वमा आएको कति वर्ष भयो? समय निकै गइसकेको छ, तर साउदी, कतार, कोरियामा काम गर्ने भाईबहिनीको हितमा यसले गरेको काम नगन्य छ। मलाई लाग्छ, त्यसो भन्दा उपेन्द्र महतो, जीबा लामिछाने, शेष घले कसैले पनि चित्त दुखाउनु हुने छैन, चित्त दुखाउनु पर्ने कुनै कारण पनि छैन। अस्ति लिवरपुलमा उपेन्द्र महतोले बोलेको कुरा पढेको थिएँ, त्यहाँ उहाँले स्वीकारेको कुरा मलाई सहि लाग्यो। उहाँले भन्नु भएको रहेछ कि एनआरएनएका हामी सबैले आफ्नै लागि काम गरेको हो; देशको लागि गरें भनेर कसैले प्रचारबाजी गर्छ भने त्यो ढोंग हो।
फेरि एकपटक एनआरएनएको चुनावको बेला आएको छ। राष्ट्रिय समिति र अन्तर्राष्ट्रिय समितिका लागि समेत उम्मेदवारहरुको नाम आउन थालेको छ। कसको कुन देशमा कति लगानी छ, कसको कति वटा होटेल, कलेज, बैंक आदि आदि छ भन्ने तँछाड मछाडका खबरहरु आइरहेका छन्। तपाईँलाई अनौठो पनि लाग्दो हो, २ हजार डलर बनाएर घर पठाउन तपाईलाई कति गार्हो छ, कसरि अरु नेपाली त्यस्तो ठूलो धनका मालिक बन्दा हुन् ? त्यो जे भए पनि अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा धनकै धाकरबाफमा नै यसपालीको एनआरएनएको चुनाव पनि सकिने छाँटकाँट छ। एनआरएनएको बिधानले प्रस्टसंग भनेको छ कि ‘विदेशमा पेशा, रोजगार वा व्यवसाय गरेर बस्नेहरु’ यसको सदस्य बन्नसक्ने कुरा। तर बास्तवमा रोजगारका लागि विदेश जाने र बिभिन्न देशमा लगानी गर्ने धनाड्यहरुका आवश्यकता र मागहरु आकाश जमिन जत्तिकै फरक छन्।
त्यसो हुँदा धनको होडबाजी र त्यसकै आधारमा हुने गरेको वा हुन लागेको एनआरएनए चुनावले तपाईलाई खासै केहि दिने देखिन्न। यो परिपाटी फेर्नका लागि त तपाईहरु जो साउदी, कतार, कोरिया लगायतका देशमा काम गर्न आउनुभएको छ, सबैले के कस्तो व्यक्तिलाई उठाउने र जिताउने भन्ने छलफल र ‘क्याम्पेन ‘ चलाउनु पर्छ, फेसबुकको जमाना छ, त्यो गर्न सजिलो पनि छ। त्यसरी मात्र तपाईले भोगेको समस्यामा काम गर्ने खालको एनआरएनए प्रतिनिधि पाउनु हुनेछ। अन्यथा एनआरएनएको पद नेपालमा धाक/ रबाफ देखाउन, नेपालमा आफ्ना लगानी र ब्यबसाय बढाउन र सरकारबाट भारी छुट र सहुलियत लिने लगायतका काममा जे जसरि प्रयोग भैरहेको छ त्यहि सिलशिला निरन्तर भई रहने निश्चित छ।
मैले यसो भनिरहँदा, व्यापार ब्यबसाय क्षेत्रका साथीहरु पनि रिसाउनु हुने छैन मैले विश्वास लिएको छु, रिसाउनु पर्ने कुनै कारण पनि छैन। किनकी मैले आफूलाई वा अरु कसैको लागि भोट माग्ने उद्धेश्यले यो लेखेको होइन। र मैले भनेको कुराले तपाईहरुको कुनै व्यापार बिजिनेसमा घाटा पर्ने पनि होइन्। तपाईहरुको ठूलो ब्यवसाय छ, देशदेशमा लगानी छ; व्यापारकै काम भ्याईनभ्याई छ, फेरि एनआरएनए जस्तो संस्थामा समय दिंदा तपाईको ब्यबसाय बिग्राला नि मात्र भन्न खोजेको हो ।
तसर्थ मेरो सुझाव के छ भने, बरु हुन्छ भने तपाइले गरे जस्तै ब्यबसायको उपाय र सफल हुने रहस्य के छ, त्यो अलि अलि भने पनि सिकाउनुस अरु एनआरएनए साथीहरुलाई देशदेशमा गएर। र अझै इच्छा भए सल्लाहकारको रोलमा बस्नुस एनआरएनएमा। कामदार बहुल देशको एनआरएनए हो, त्यसमा कामदार बर्गलाई नै प्रतिनिधित्व गर्न दिनुस्। कामदार हुन्, पढेलेखेका छैनन् भन्ने भ्रम छ भने, त्यो भ्रम कृपया त्याग्नुस। देशको स्थिति बिग्रेर पो नत्र साउदी, कतार, कोरियामा काम गर्ने प्राय सबै यी भाईबहिनि शिक्षित नै छन्; ब्याचलर, मास्टर्स गर्ने समेत कति छन् कति। त्यसैले सक्छन्, आफ्नो वर्गको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन, आफ्नो आवश्यकताका बारे बोल्न सक्छन, जत्ति पनि सक्छन्।
Facebook: Lok Bhattarai
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ६, २०७४ ०२:१४:५३